Ndeipi nzira dzakaratidzwa dzekutora backlinks nokukurumidza?
Unofunga here kuti nzira chete yekuwana yakanakira backlinks nokukurumidza ndeyokugadzirisa zvinhu zvakawanda uye kumirira apo vashandisi vachabatanidza kwauri? Kana hongu, zvino nyaya ino ichazarura maziso ako kuchokwadi. Zvechokwadi, kusika unhu hwehuwandu hunokosha kune chero tsvaga yekutsvaga kugadzirisa maitiro, asi zvinotora mwedzi kana kunyange makore kukwezva vaverengi kuhutano hwako.
Muchikamu chino, tichakurukura kuti tingakurumidza sei kugadzirisa nzira yekuwana backlinks kuwebsite yako uye kuvandudza mararamiro ako kumutsvaji wekutsvaga injini peji.
Nzira dzekudzorera kumashure kunotsvaga
Pindura mibvunzo pamusoro pe Quora
Quora vari kutsvaga mhinduro dzakakodzera kumibvunzo yavo. Icho chikwata chinoputika, umo vanhu vangani zviuru zvamazuva vari mubvunzo yavo. Zvinenge zvoupenzi kusazvidza mukana uyu kukura bhizinesi rako kuziva uye kukwezva vatengi vatsva pawebsite yako. Zvose zvaunoda kuita ndezvokutsvaga mazwi ako akadai ane niche. Somugumisiro, uchawana mazana ezviuru zvemibvunzo iri kumirira mhinduro yako. Iwe unofanirwa kupindura nyaya iyo iwe uri nyanzvi, uye kana pane imwe nzvimbo yebhuku kana bhokisi mukati memumunda wako iyo inogona kushanda semhinduro yakakodzera kumubvunzo, isa chibatanisiro nayo. Zvisinei, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti hausi kungobatanidza chete newebsite yako kuti uwane hukama. Kana iwe uchida kuparadzanisa Quora, saka kazhinji zvichaita kuti zvikwereti zvepuratifomu iyi, uye iwe ubvise kubva pane.
Batsira mutori wenhau
Kune chinyorwa chinobatsira vanyori, mablogi, uye vatori venhau rinonzi HARO. Chero yevanhu vane hanya vanogona kutumira mibvunzo ipapo, uye kana mune mhinduro kumibvunzo yavo zvichibva pakutsvakurudza, unogona kuwana mhedheni yepachena. Nyaya yako inogona kuonekwa pane webhusaiti yepaiti nevevanhu vakawanda kana kutora mhepo yakasununguka. Iwe unogona kukwanisa kuparidzirwa pazvinyorwa zvemashoko akadaro seNew York Times, Entrepreneur, nevamwe, izvo zvinoita kuti HARO ive nzvimbo yakakwana kuti atore zvakakwirira kumashure. Muzvokwadi, haugoni kuwana hukama hwakawanda kubva pano. Zvisinei, izvo zvauchakwanisa kuwana zvinogona kukuunza zvakakosha uye kuvimba.
Kutsvaga zviputsika zvakaputsika
Chivako chinoputsika chingava mukana wakakwana wekudzokera shure. Zvisinei, inogona kuva yakaoma kana iwe uchitarisa pane imwe nzira yakakanganiswa yehukama. Kune mawebsite akawanda akaparadzanisa zvikwereti, asi kure nevose vanoda kugadzirisa hukama hwavo hwakaputsika ndokuisa yako pane nzvimbo dzakaputsika. Kuti uwane migumisiro yakanaka iwe unoda kuderedza kutsvaga kwako. Iwe unofanirwa kutsvaga webhu inobva kune dzimwe nhengo dzakaputsika mukati memisika yako yemisika. Sezvo mutemo, webmasters vanogona kunge vakagadzirisa zvakaputsika mazano pamapeji avo ewebhu ipapo mabhuku akawanda e blog. Nokuita kudaro, vanoita mamwe magwara kumunda wavo uye vanovandudza webhusaiti SEO Source .